Monkey King Slot - Myanmar Online Game
မျောက်ဘုရင်ကြီး စွန်းဝူခုန်း ဆိုရင်တော့ မသိတဲ့လူမရှိလောက်ပါဘူး။ တရုတ် ဒဏ္ဏာရီထဲက မျောက်ဘုရင်ကြီး ဝူခုန်းရဲ့ဇာတ်လမ်းက စာအုပ်၊ ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီး အမျိုးမျိုးထွက်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ သိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ အခုဆိုရင်တော့ မျောက်ဘုရင်ကြီးရယ်၊ ဆရာတော်ရယ်၊ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ပါဝါပြင်းတုတ်တို့ဟာ Monkey King Slot ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Slot ကစားနည်းအသွင်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီနော်! Row3ခု Reel5ခုနဲ့ရှိနေပေမယ့် အရမ်းမရှုပ်ထွေးတဲ့ 25 payline စနစ်ကိုသုံးထားတာမို့ ဆော့ကစားရတာ ရှိရှင်းတဲ့ကစားနည်းလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ရိုးရှင်းတယ်ဆိုလို့ လျှော့တော့မတွက်လိုက်နဲ့နော်။ ဒီကစားနည်းမှာ Free Spin အပြင်ကို ပါဝါပြင်းတဲ့ Huo Yan Jin Jing Respin ကလဲ ကိုယ့်အတွက် လောင်းကြေးတွေအများကြီးတိုးပွားဖို့အတွက် အကူအညီပေးသွားမှာပါ။ ဒီတော့ စွန်းဝူခုန်းနဲ့အတူတူ စွန့်စားခန်းခရီးထွက်ဖို့အတွက် အခုပဲ Slot လေးကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
Symbol တွေကိုအရင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ Special Symbol နဲ့ ရိုးရိုး Symbol တွေခွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Special Symbol မှာဆိုရင်လဲ ဇာတ်ကြောင်းရဲ့နာမည်ကြီး ဇာတ်ကောင်တွေ ပစ္စည်းတွေကိုယူပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ payout နှုန်းအများဆုံးကတော့ ဆရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ ဝူခုန်းကိုတော့ ထိန်းနိုင်တဲ့ဆရာတော်ကတော့3ခုကျရင် 25,4ခုကျရင် 50,5ခုကျရင် 200 ပြန်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒုတိယ Payout နှုန်းအများဆုံးဇာတ်ကောင်တွေကတော့ ကျွဲမိစ္ဆာနဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က3ခုကျရင် 15,4ခုကျရင် 25,5ခုကျရင် 100 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စာလိပ်နဲ့ ပုတီး တို့ကတော့ Special Symbol ထဲမှာ Payout နှုန်းအနည်းဆုံး Symbol တွေဖြစ်ပြီးတော့3ခုကျရင် 10,4ခုကျရင် 15,5ခုကျရင် 50 ပြန်ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ရိုးရိုး Symbol တွေကတော့ ဖဲချပ် Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K, Q, J, 10 တို့ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့အကုန်လုံးက3ခုကျရင် 5,4ခုကျရင် 10,5ခုကျရင် 25 ပြန်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကလဲ တခြား Slot တွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ရိုးရိုး Symbol ကိုမှထပ်ပြီးတော့ Payout နှုန်းတွေခွဲထားလေ့ရှိပေမယ့်လဲ ဒီမှာတော့ ညီမျှစွာပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင်စွန်းဝူခုန်းက ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ? မျောက်ဘုရင်ကြီးက ထင်ရာစိုင်းတက်ပြီးတော့ ထိန်းရခက်တာကြောင့် သူ့ကိုတော့ Wild နေရာမှာပေးထားပါတယ်။ Wild ကတော့ဖဲကစားနည်းမှာဆိုရင် Joker လိုပဲ ကျတဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလို အစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူ့ကို3ခုကျရင် 25,4ခုကျရင် 75,5ခုကျရင် 300 ပြန်ပေးပါတယ်။ သူကအစားထိုးပေးနိုင်တဲ့ထဲမှာ Free Spin Bonus Symbol တော့မပါပါဘူးနော်။
Free Spin Bonus ကိုတော့ စွန်းဝူခုန်းရဲ့ လက်စွဲတော်လက်နတ်ကြီး တုတ် Symbol အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ သူကတော့ Reel 3, 4,5တို့မှာသာပေါ်နိုင်ပြီးတော့3ခုကျရင်2ပြန်ပေးပြီး လောင်းကြေးနဲ့မြှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကို3ခုကျမယ်ဆိုရင် Free Spin6ခါ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Free Spin လှည့်နေရင်းနဲ့လဲ Free Spin Bonus Symbol ထပ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ တစ်ခါပေါ်လာတိုင်း Free Spin6ခါပေါင်းထည့်ပြီး အများဆုံး အခါ 30 အထိလှည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာအရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်က Free Spin လှည့်နေရင်းနဲ့ Reel3မှာ Wild Symbol ပေါ်လာပြီဆိုရင် Reel3ရဲ့နေရာ ၃ခုလုံးကိုစွန်းဝူခုန်းကနေရာယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Free Spin ပြီးထဲအထိ မပျောက်သွားတော့ပဲ Lock ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင် Huo Yan Jin Jing Respin Feature လေးကအသက်ဝင်လာပါပြီ။ Reel3မှာ Wild3ခုဆင့်ပြီးပေါ်လာတိုင်း Reel3တစ်ခုလုံးကို စွန်းဝူခုန်းကနေရာယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Respin မပြီးမချင်း ကျွဲမိစ္ဆာနဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော် တို့ကို Burn လုပ်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွဲမိစ္ဆာနဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော်တို့ မပေါ်လာတော့ဘူးဆိုရင် Reel 1,2,4နဲ့5တို့က ကျွဲမိစ္ဆာနဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော် Symbol တို့နဲ့ပြည့်သွားပြီးတော့ သူတို့ကလဲ စွန်းဝူခုန်း Wild Symbol အနေနဲ့ ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ Wild တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဒီ Respin Feature လေးရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ ပွပေါက်တိုးစေမှာအမှန်ပါပဲ!
ကဲ.. ဒါဆိုရင်တော် မျောက်ဘုရင်ကြီးနဲ့၊ ဆရာတော်တို့နဲ့အတူ စွန့်စားခန်းခရီးထွက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot Section လေးကိုလှမ်းခဲ့ပြီး Monkey King Slot ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုလာကစားလိုက်ပါ!
Thank you for every other informative web site. Where else could I get that kind of info written in such an ideal manner? I’veaundertaking that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such info.